Man United oo aan ka mid ahayn labada kooxood ee hoggaaminaya tartanka loogu jiro saxiixa Philippe Coutinho suuqa xagaagan – Gool FM
Man United oo aan ka mid ahayn labada kooxood ee hoggaaminaya tartanka loogu jiro saxiixa Philippe Coutinho suuqa xagaagan
(Yurub) 02 Abriil 2019. Waxaa daaha laga qaaday labada kooxood ee hoggaaminaya tartanka loogu jiro saxiixa xiddiga naadiga Barcelona ee Philippe Coutinho, iyadoo naadiga Man United aysan ka mid ahayn.
Paris Saint-Germain iyo Chelsea ayaa la soo sheegayaa inay yihiin labada kooxood ee hoggaanka u haya tartanka loogu jiro saxiixa weeraryahanka kooxda Barcelona ee Philippe Coutinho marka uu furmo suuqa kala iibsiga xiddigaha ee xagaagan.
26-sano ayaa kooxda Barca kaga soo biiray Liverpool bishii Janaayo ee sanadkii 2018-kii, waxaana uu u dhaliyey 19 gool 64 kulan oo uu tartammada oo dhan u saftay kooxda difaacanaysa horyaalka Spain.
Weeraryahankan ayaa mustaqbalkiisa kooxda reer Spain shaki la galiyey isbuucyadii dhowaa, Barca ayaa la rumeysan yahay inay albaabada u furtay inay xagaagan iska iibiso isaga.
Manchester United ayaa la la xiriirinayey saxiixa laacibkan, laakiin Wargeyska Sport ayaa haatan warinaya in PSG iyo Chelsea ay haatan yihiin labada kooxood ee hoggaanka u haya tartanka loogu jiro saxiixa Coutinho suuqa kala iibsiga xiddigaha ee xagaagan.
Warbixinta ayaa sheegeysa in Chelsea ay u aragto kubadsameeyaha inuu bedel u yahay Eden Hazard, kaasoo si aad ah loola xiriirinayo kooxda Real Madrid, halka PSG ay had iyo jeer xiiseynayso xiddigan ka soo jeeda Koonfurta Ameerika.
Kooxda Inter Milan oo doonaysa inay heshiiska Icardi uga faa’iideysato sidii ay Real Madrid uga heli lahayd Weeraryahanka…
Kooxda Real Madrid oo wada doonaysa in Paul Pogba iyo Eden Hazard wada geyso garoonka Santiago Bernabeu